Izinsizakalo zethu - IYunis International Ukuhweba Co, Ltd.
I-Yiwu YUNIS Imp & Exp CO., I-LTD ingumthengisi wempahla ethunyelwa ngaphandle osuselwa eChina isikhungo sezentengiso esikhulu nokusabalalisa izinto - i-Yiwu. Sisebenzisana ne-Yiwu agent, i-ejenti yokuthumela i-Yiwu, i-ejenti yokuthenga ye-Yiwu. Futhi wazibandakanya ochungechungeni lwenkonzo yokuthumela ngaphandle. Kithi ukubhukelwa kwamahhotela, ukubhuka esikhumulweni sezindiza, ukumiswa komkhiqizo, ukuthenga, ukuqondiswa kwemakethe, ukuhumusha, Ukuhlolwa kwempahla, ukugcinwa kwezinto zokugcina impahla, ukumenyezelwa kwesiko laseChina, ukulayisha izinto zokuhambisa, ukuthunyelwa kwamanye amazwe (olwandle noma umoya). Njengomenzeli wakho we-Yiwu wokuhlonza nokuthumela ngaphandle, kusho ukuthi unehhovisi e-Yiwu / China, ngakho-ke kungakongela isikhathi nezindleko. Izinsizakalo zethu azikhawulwanga edolobheni le-Yiwu, singakusiza ukuthi wenze ibhizinisi kunoma yiziphi ezinye izindawo zaseChina.Singathanda ukuba ngumlingani wakho othembekile, owomnotho, othembekile nowesikhathi eside eChina. Sinikeza inkosikazi yomhumushi yamahhala yemihlahlandlela yemakethe. I-Yiwu YUNIS Imp & Exp Co, i-LTD yisinqumo sakho esihle kunazo zonke!
Inqubo yethu yezinsizakalo:
Ngaphambi kokuthi ufike e-Yiwu
1. Kukucebise isikhathi esihle kakhulu sohambo lwakho lwebhizinisi oluya eChina.Source abahlinzeki futhi bahlele imihlangano ngaphambi kokuba ufike eChina.
2. Khipha incwadi ye-Inover China (isimemo sebhizinisi noma isimemo esisemthethweni. Singakusiza futhi ngezinkinga ze-visa)
3. Bhuka ihotela kuwe ngesaphulelo esihle kunazo zonke.
4. I-Airport Pickup evela e-Yiwu, eShanghai, Hangzhou
Lapho ufika i-Yiwu, qala ukuthenga kwakho
1. Kukuqondise ukuthi uvakashele izimakethe zomkhiqizo ofanele futhi uvakashele zonke izitolo ngazinye, noma uvakashele amafektri amahle uma kubhekelelwa
2. Humusha nokuxoxisana ngamanani phakathi kwakho nomphakeli
3. Bhala phansi i-oda, bhala yonke imininingwane efana nalokhu: i-athikili ayikho incazelo, ubungako, ubungako, umbala, imininingwane yephakethe, imitha ye-cube, ngasikhathi sinye thatha izithombe zazo zonke izimpahla oziyalezile.
4. Yenza ifomu loku-oda lakho lokuthi uhlole inani, inani eliphelele, imitha yonke ye-Cube.
Ngemuva kokuthi uqede ukuthenga kwe-Yiwu
1. Faka ama-oda anezithombe zomkhiqizo kubo bonke abahlinzeki
2. Landela wonke ama-oda ukwenza isiqiniseko sokuthi ukukhiqizwa kwezimpahla kuzoqedelwa Ngokwesikhathi sethu esilindelekile. Bika inqubo kuwe igxathu negxathu
3. Isitoreji samahhala sokugcina impahla, siqoqa izimpahla ziye egumbini lethu lokugcina bese sihlola izimpahla ukuze siqiniseke ukuthi ama-oda ahambisana nesidingo sakho.
4. Sabalalisa inkokhelo yezimpahla kubahlinzeki bakho
5. Ngokwesicelo sekhasimende, yindawo yokuhambisa izincwadi bese uhlela ukuthunyelwa.
6. Lungisa amadokhumenti athumela ngaphandle. Ukumemezela amasiko aseChina
7. Yenza amadokhumenti angenise amazwe aphesheya
8. Thumela yonke idokhumenti kanye ne-B / L ngokulethwa okucacisiwe, ukuze wenze imvume yeCustoms.
Lapho ungekho i-China. Singaba umsizi wakho webhizinisi othembekile
1. Uma kukhona imikhiqizo edinga ukuthola usizo eChina, Sizozama ukukunikeza isicaphuna isikhathi esifushane.
2. Thumela imininingwane yemikhiqizo yakamuva, ethandwayo nehlobene nayo.
3.Khetha imiyalo yakho. Uma u-oda kwamanye amafektri, Singaya efektri siyohlola ikhwalithi, inani, imininingwane yokupakisha nabo bonke abanye. Bese sikuthumela umbiko wokuhlola kuwe ukuze uqiniseke ukuthi i-oda lihambisana nesidingo sakho.
4. futhi sihlanganise izimpahla zabaphakeli abahlukahlukene abavela ezindaweni ezahlukahlukene esigcini sethu samahhala.
I-1 、 YUNIS inethiwekhi ebanzi yemboni kanye nezimboni zethu ezinhlanu .Ungathenga izinto ngentengo efektri.
Ama-2 、 YUNIS amukela ama-oda amancane / wesivivinyo evunyelwe yizimboni.
3 、 YUNIS QC lady lilandelela yonke imiyalo ebekwe ukulawula ikhwalithi.
I-4 、 YUNIS yamukele ukwakheka ngokwezifiso nokukhiqizwa.ODM, iphrojekthi ye-OEM yamukeleka kakhulu.
I-5 、 YUNIS inganikeza amakhasimende ethu inani lokuncintisana lokuthumela njengoba sinomlingani othembekile ongaphambili ongaziwa.
I-6 、 I-YUNIS inendawo yethu yokugcina izinto futhi ihlanganise izimpahla zomphakeli ezahlukahlukene ezivela ezindaweni ezihlukile esigcini sethu samahhala.